Ntụle Semalt - Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Njikere Dị Mma
Nchịkọta weebụ bụ usoro a pụrụ ịtụkwasị obi na nke a ma ama maka ma ndị nchọpụta weebụ na ụlọ ọrụ, nke gbalịa iwepụ ọtụtụ ozi sitere na weebụsaịtị dị iche iche n'Ịntanet. Taa, ihe ọmụma kachasị mkpa bụ Internet, ọtụtụ ndị na-enyocha weebụ na-ejikwa ya kwa ụbọchị. Python bụ asụsụ na-eme ihe na-ewu ewu. Ọ dị mfe iji, ọtụtụ ndị na-enyocha weebụ na-ahọrọ ya iji mee ihe ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ha na-achọ ilepụ ndepụta, ọnụahịa, ngwaahịa, ọrụ na data ndị ọzọ, ha na-eji ya. N'ezie, Python na-enye ndị ọrụ ya ọrụ dị ịtụnanya maka ọrụ ndị a.
Uru nke Iji Eke Ọgba
Iji mezuo ọrụ ha, ndị na-enyocha weebụ na-eji ụlọ akwụkwọ Python eme ihe, nke na-enye ha ohere iwepu ngwa ngwa na ngwa ngwa. N'ezie, ọ na-enye ndị ọrụ ya ụzọ dị mfe iji chọpụta, chọta ma gbanwee data ha gbakọtara na faịlụ dị iche iche na kọmputa ha.
Ndị ọrụ ya nwere ike ịchọta data oge ha chọrọ site na weebụsaịtị dị iche iche na weebụ. Ọzọkwa, ọ na-enye ndị ọrụ ya nhọrọ iji mee ka atụmatụ ha na-agba ọsọ n'oge ụfọdụ n'ime ụbọchị. Ọ na-enyekwa ọrụ nnyefe data.
Ịmụta iji iwepụta akwụkwọ Python na-arụ ọrụ bụ ọrụ dị mfe, nke na-enye ndị ọrụ ya ohere dị ịtụnanya ma dị irè iji mee ka ọrụ ha dịkwuo mma.Site n'ime nke a, ndị ọrụ nwere ike ịmatakwu otu esi arụ ọrụ weebụ a. Dịka ọmụmaatụ, iji kpochapụ mkpokọta weebụ , ha ga-enwe ike 'ikwusa' na weebụ (HTTP), site na iji arịrịọ (ụlọ akwụkwọ Python). Mgbe ahụ, ha nwere ike weghachite data niile, ha ga-ewepụ ha site na HTML (site n'iji lXML ma ọ bụ Mma Ofe)
Echiche Python na-achọ ime web scraping ọrụ dị mfe maka ndị nyocha weebụ. Ọ bụrụ na ihe ọjọọ niile data ma wepu ha ma nye ndị ọrụ ya. Ọ na-enye ụfọdụ nnukwu ihe onwunwe, nke na-enye HTML aha aha, iji mee ka ha dị nnọọ mfe maka ndị ọrụ. Python bụ usoro dị ukwuu, nke a na-eme karịsịa maka ọrụ dị ka ntanetị weebụ. Ọ na-enye ụfọdụ ụzọ dị mfe maka ndị ọrụ ya iji gbanwee osisi parse. N'ezie, a na-emepụta usoro asụsụ a n'elu akụkụ kachasị mma nke Eke Ọgba, dị ka lXML ma ọ bụ nnọọ mgbanwe. N'ezie, ọ chọtara data ma kpọkọta ozi niile dị mkpa maka scrapers web n'ime nkeji. Karịa kpọmkwem, ụlọ akwụkwọ Lxml na-ahapụ ndị ọrụ ya ka ha rụọ usoro osisi site na iji XPath. N'ihi ya, ha nwere ike ịkọwa n'ụzọ doro anya ụzọ nke mmewere nwere ihe ọmụma. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndị ọrụ chọrọ iwepu aha site na weebụsaịtị, ọ dị ha mkpa ịchọpụta ụdị ụdị HTML ọ na-ebi ma wepụ data ahụ Source .